राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७४ असार १ बिहिबार | १०:५४
एमालेको चेतावनीमा सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ। अहिलेको समस्याको समाधान भनेको निर्वाचन स्थगन हो। तोकिएको मितिको निर्वाचनलाई रद्ध गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ। यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। पर्सिको दिन नोमिनेसन छ, यो अवस्थामा मधेसको अहिलेको अवस्था काठमाडौंबाट अनुमान गरेभन्दा ज्यादै जटिल छ। म अहिले मधेसमा नै छु, आन्दोलनको मैदानमा नै छु।
यहाँको ‘मुड’ हेर्दा जबर्जस्ति मनोनयन गर्न खोजिए नरसंहार हुने अवस्था छ। सरकार पेलेरै अघि बढ्ने मनशायमा छ भने अकल्पनीय दुर्घटना घट्न सक्ने अवस्था छ। सरकारको रवैयाको कारण देश अर्को खाडलतर्फ जान सक्छ। निर्वाचन त कहाँ हो कहाँ हाम्रा सामु अरु नै चुनौति आउन सक्छ। तसर्थ, अहिले शेरबहादुर जी को पहिलो प्राथमिकता भनेको सके निर्वाचनको मितिलाई रद्ध गर्नु नसके चुनाव स्थगीतको निर्णय गर्नु हो।
उहाँहरुले निर्वाचनपछि संविधान संशोधन हुन्छ भनिरहनु भएको छ। निर्वाचनपछि पनि हुने यहि गणित न हो। भोलि स्थानीय तह निर्वाचनले व्यवस्थापिका संसदको गणितमा फेरबदल गर्ने होइन। व्यवस्थापिका संसदको गणित भोलिपनि यहि रहने हो। मनमा जाल, झेल र कपट छ भने एउटा कुरा होइन भने एमाले नेताहरुले बोलेजस्तै प्रतिबद्धता छ भने संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न दिए हुन्छ। त्यसलाई संसदमा छलफल गरौं र थप परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भनेपनि गरौं। तर संशोधन गरौं।
म त राजपा नेपालको सामान्य कार्यकर्ता परें, मैले बोल्दा धेरै बोलेजस्तो हुन्छ होला तर आन्दोलनमा जसरी मानिसको समर्थन देखिँदै छ त्यही समर्थनले हामीलाई भोट दिन्छ भन्ने आशाका साथ उपेन्द्रजी चुनावमा कुद्नुभएको हो। तर, ति जनता राजपाका साथ रहे। यादवजीका कार्यकर्तापनि उनीसंग बाँकी रहेका छैनन्। उनका कार्यकर्ताले नवलपरासीमा पार्टी छाडिसके। नवलपरासीका सबै कार्यकर्ता राजपाको आन्दोलनमा होमिइसके।
जनता यसरी हाम्रो आन्दोलनमा होमिँदा, यस्तो प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता प्राप्त हुँदा निर्वाचन परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने त निश्चित नै थियो। तर, हामी अहिले निर्वाचन परिणामप्रति विल्कुल चिन्तित छैनौं। निर्वाचनप्रति पनि चिन्तित छैनौं। हाम्रो चिन्ता संविधान संशोधन, मुद्धा फिर्ता, स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बृद्धि, बाँकी रहेकालाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई क्षतिपुर्ति जस्ता मागमा छ। हाम्रा यी मागहरु यथावत छन्। मागहरुमध्ये कुनै कम प्राथमिकताका र कुनै बढि प्राथमिकताका भन्ने छैन, सबै मागहरु समान प्राथमिकताका छन्।
बाँकी काम त मन्त्रिपरिषदले गरिहाल्छ नि भन्ने पनि केहि साथीको तर्क छ। मन्त्रिपरिषदले सहजै गर्न सक्ने कार्यपनि गरेको छैन। हामीलाई पटक पटक बरु धोका दिएको छ। श्रावण १९ गते भएको तीनबुंदे सम्झौता आजसम्म पनि पुरा गर्न सकेको छैन। कहिले गरेजस्तो गरेर आंशिक पुरा गर्ने, कहिले के गर्ने आलटाल भइरहेको छ। अहिलेपनि मन्त्रिपरिषदबाट गर्न सकिने निर्णयहरु पनि हुन सकेको छैन।
जहाँसम्म संसदको बिजनेसको कुरा छ, इमानदारिताका साथ संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए एमाले बिनापनि संशोधन हुन सक्थ्यो। तर सरकारले एमालेमा धेरै समय खर्च गर्यो। हामीलाई आएर कांग्रेस र माओवादीका नेताले एमाले पनि मान्न तयार छ, एमालेले पनि साथ दिन्छ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो। एमालेको समेत सहयोगमा स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचनपछि हामी तुरुन्त संशोधन गर्छौँ भन्नुभएको थियो। खोइ त संशोधन? त्यसैले यो कपटपूर्ण तर्क हो।
मधेसका जनता धेरै शिक्षित छैनन्। अब दुई तिहाइ, एमालेको यति संख्या, संसदमा यसको यति प्रतिनिधित्व जस्ता कुरा केहि देख्दैनन्। मधेसका जनता नेपालको संविधानको पाना पाना पल्टाएर हेर्न चाहन्छन्—मेरा अधिकार लेखिए कि लेखिएनन्? आफ्नो अधिकार लेखिएको संविधानको आत्मानुभुति गर्न चाहन्छन्। संविधानप्रति स्वामित्व स्थापित गर्न चाहन्छन्। यसरी अधिकार स्थापित भइसकेको संविधान अनुसार हुने निर्वाचन कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ। अहिलेको निर्वाचन हाम्रो जिम्मेवारी भित्रको होइन।
काठमाडौंका केहि बुद्धिजिवी र केहि नेताहरुले तिमीहरु निर्वाचनमा गएनौ भने मोहन वैद्य हुन्छौ, तिम्रा कार्यकर्ताहरु लोभी छन्, निर्वाचनका लागि विजय गच्छदार वा उपेन्द्र यादवतर्फ आकर्षित हुन्छन् भनेको हामीले सुनिरहेका छौं। हाम्रो आन्दोलन चलिरहेको छ, हामी ग्राउण्डमै छौं। तपाईँलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु, त्यस्तो कुनै संकेतसम्म पनि छैन। निर्वाचन लड्न इच्छुक व्यक्तिहरुले पनि हामी निर्वाचन हुन दिँदैनौं भनेर हाम्रो आन्दोलनमा आउनुभएको छ। यो सशक्त आन्दोलनका बिचमा सरकारले मधेसमा निर्वाचन गराउने सपना नदेखोस्। हामीपनी पहिला पहिला त्यस्ता विश्लेषण सुनेर एकछिन गम्भिर त हुन्थ्यौं, तर आन्दोलनमा ओर्लिएको जनताको जोशले राजपा हौसिएको छ। हाम्रा आन्दोलनमा आएको व्यापक जनसमर्थनले हाम्रो हौसला पनि बढेको छ। र, अब तिम्रा कार्यकर्ता भाग्लान, मोहन वैद्य हौला जस्ता औचित्यहिन अस्त्र प्रयोग नगर्दा हुन्छ।
निर्वाचनको पक्षमा हिँडेका उपेन्द्र यादवलाई मधेसमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। आजै उनको पार्टी जनकपुरमा प्रहरी तैनाथ गरिएका फोटो देखेको थिएँ। निर्वाचन समर्थन गर्नेका बिरुद्धमा सिंगो मधेस ओर्लिएको छ। हामीप्रति गरिएका सबै आंकलन मिथ्या हुन्, जनता निर्वाचन चाहँदैनन्। जनता संविधानप्रति स्वामित्व चाहन्छन्, सरकारले आजै भोलिमा गर्नुपर्ने एकमात्र प्राथमिक कार्य भनेकै दोश्रो चरणको निर्वाचन सके रद्ध होइन भने स्थगीत गर्नुपर्छ।
हामीले निर्वाचनका सबै कार्य स्थगीत गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। दुईटा प्रदेशमा स्थगन गर्ने अन्यत्र नगर्ने भनेका छैनौं। प्रचण्डजीले भविष्यको पुस्ताले मलाई कलंकित नगरोस् भनेर पहिलो चरणको निर्वाचन गराउनुभयो, त्यो ठिकै छ। तर अब तत्काल निर्वाचन रद्ध वा स्थगन गरेर राजनीतिक विषयलाई हल गरौं र निर्वाचन गरौं। त्यसोगर्दा काठमाडौंको मेयरभन्दा राजविराज नगरपालिकाको मेयर ६,७ महिनाले ‘जुनियर’ हुने हो, त्यो कुनै ठूलोकुरा होइन। त्यसलाई भयंकर समस्या देखाएर जबर्जस्ति नरसंहार गर्ने, जनतालाई लडाएर रक्तपात मच्याउने, प्रहरी र जनता भिडाएर नेपाली जनताका छोराछोरी मार्ने मराउने नियतका साथ हुने निर्वाचन कुनैहालतमा सम्पन्न हुँदैन। सरकारलाई पनि यसो नगर्न हाम्रो सल्लाह छ।
पारिपट्टीबाट आएकाले ढुंगा हानेर निर्वाचन स्थगीत हुँदैन भनेर उपेन्द्रले जे भनेका छन्, यो लाजमर्दो बयान हो। हिजो आन्दोलनमा साथ दिने, हिजो उनलाई फुलको माला लगाउने, हिजो उनलाई नेता मान्ने मधेसी समुदायलाई आज रतन्धोयुक्त आँखाले रातारात पारीपट्टीबाट आएको देख्न थाले। उनको बयान सुनेर लाजै लाग्यो। उनको बयान प्रतिक्रिया दिनसमेत लायक छैन। यत्ति भन्छु— उपेन्द्र यादव गद्धार हुन्, उनी अब हाम्रा सखा रहेनन्।
(सुमन राजपाका नेता हुन्) नेपाल खबरबाट साभार
Kathmandu, Feb5: Nepal Communist Party (NCP)’s chair Pushpa Kamal Dahal has congratulated the Nepali cricket team for its ‘outstanding’ achievements in international cricket tournaments. During his meeting today with the squad at his Khumaltar-based ...
Surkhet, Feb5. Most of the rural women of this area are still confined to merely handle household and kitchen chores. The rural women also are equally suffering from various forms and manifestations of ...
वडा सदस्यद्वारा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक सम्मानित
सर्लाही २४ माघ । सर्लाही जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रस्थित लालबन्दी नगरपालिकाका एक वडा सदस्यले एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई सम्मान गरेका छन् । लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडा सदस्य प्रेम प्रसाद आचार्य(उमेश) ले ...
उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा र पहाडी भूभागमा हिमपात
काठमाडौ २४ माघ । पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा र पहाडी भूभागमा हिमपात भइरहेको छ । पश्चिमी वायुको प्रभाव हिजो बेलुकादेखि नै देखिएकाले मौसम पूर्ण रुपमा बदली भई तराईका केही स्थानमा ...
बेरुजु फर्छ्योट प्रभावकारी बनाउन लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौ २४ माघ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई आगामी वैशाख महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका ...
सामुदायिक रेडियो दिदि बहिनीको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न,
पर्वत २४ । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । माघ २७ गतेदेखि शुरु हुने गण्डकी स्तरिय महिला महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । रक्तदान नै जीवन दान भन्ने मुल ...
थाइल्याण्ड सरकारको सहयोगमा बन्दै महादेव मन्दिर
काठमाडौँ, २३ माघ । त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्य २५ प्रतिशत सकिएको छ । विसं १८७५ मा उक्त मन्दिर रानी ललित त्रिपुरासुन्दरीले निर्माण गर्नुभएको हो । मन्दिर निर्माणमा करीब रु २८ करोड निर्माण लागत लाग्ने अनुमान ...
काठमाडौँ, २३ माघ । नेपाल सरकारद्वारा बन्देज लगाइएको जुवा तथा तास खेलेको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले चार महीनामा १७७ जुवाडेसहित रु २५ लाख बरामद गरेको छ । विसं २०७५ असोज २४ गतेदेखि माघ २२ ...
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका पानी घट्ट लोप हुँदै
अमरगढी, २३ माघ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका पानी घट्ट लोप हुन थालेका छन् । केही वर्ष पहिले पर्याप्त मात्रामा प्रयोग हुने घट्ट अहिले लोप हुने अवस्थामा रहेका छन् ।सुदूरका पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय खोलाका ...
काठमाडौँ, २३ माघ । दुई/ तीन वर्ष पहिलेसम्म पढाइमा राम्रो छोरा विस्तारै कमजोर बन्दै जाँदा सातदोबाटोका रमण थापा हैरान हुनुहुन्थ्यो । चार कक्षामा अध्ययनरत १२ वर्षीय उहाँको छोरा रोहन केही समयदेखि विद्यालयबाट फर्किएपछि झोला नै ...
नेपालबाट हज गर्न मक्का जाने हजयात्रीको सङ्ख्या दोब्बर पार्ने सरकारको प्रयास जारी
काठमाडौँ, २२ माघ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालबाट हज गर्न मक्का जाने हजयात्रीको सङ्ख्या दोब्बर पार्ने सरकारको प्रयास जारी रहेको बताउनुभएको छ । विगतमा एक हजार २०० यात्री हज गर्न मक्का गएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले ...
प्रसूतिगृहमा कार्यरत चिकित्सक बबिता शाहकी दुई वर्षीया बच्ची अपहरण गर्ने गुप्ता पक्राउ
सेनाले दान गरेको रगतका कारण एक सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगियो